Ukucima kukagesi kungase kuzwele kakhulu kweyensimbi | News24
Ukucima kukagesi kungase kuzwele kakhulu kweyensimbi
Johannebsurg - Yehle ngo-1% imikhiqizo embonini yensimbi nakwezobunjiniyela phakathi kuka-Okthoba noNovemba ngenxa yokuphazamiseka kukagesi okwenziwe u-Eskom, kusho i-Eskom, the Steel and Engineering Industries Federation of SA (Seifsa)ngoMsombuluko.
Isikhulu sezomnotho seSeifsa, uHenk Langenhoven, uthe ukukhula kwemikhiqizo okuphazimisekile ngo-2014 manje sekungabalelwa ku-2.5 wezinyanga ezingu-11 zokuqala onyakeni ka-2014 uma kuqhathaniswa nesikhathi esifanayo nango-2013.
Funda nalolu daba: U-Eskom wethemba ukuthi uzomelana nengcindezi.
Uthe imikhiqizo yerabha yona yehle ngo-5.9%, kanti ekaplastiki yehle ngo-2%.
ULangenhoven ugcizelele ukuthi ukuphazamiseka kukagesi okubonakele ngenyanga kaNovemva kungase kwehlise imikhiqizo ngo-23% kule mboni uma kuqhubeka.